चोरीका घटनाले पुनर्वासका प्रहरी बदनाम बन्दै – Hello Punarwas
चोर पत्ता नलागेपछि सहकारीले राख्यो विशेष साधारणसभा
पुनर्वास, २८ चैत ।
चोरी भएको एक महिना बितिसक्दा पनि चोर पत्ता नलागेपछि पुनर्वास सहकारीले विशेष साधारणसभाको आयोजना गरेको छ ।
बुधबार एक विशेष साधारण सभाको आयोजना गरी शेयर सदस्य, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सञ्चालक समितिले चोरीकै घटनाको विषयमा गहन छलफल गरेका हुन् ।
चोरी भएको एकमहिनामा पनि प्रहरीले देखाएको उदासिनता माथि सभामा उपस्थित बक्ताहरुले टिकाटिप्पण गरे । चोरी भएकै दिन साईकलहरु पनि भेटिएको र भेटिएका साईकलहरु प्रहरीले सहकारीलाई बिना जानकारी उनीहरूको जिम्मा लगाएको भन्दै सभामा प्रहरी प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
सहकारीको चेक, लालपूर्जा र अन्य केही कागजातहरु आधा जलेको अवस्थामा पुनर्वास नगरपालिका–८, जनजागरण सामुदायिक बनमा भेटिएको सहकारीका ब्यवस्थापक एककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर अर्कातिर स्थानीयहरुले घटनाको एक महिनासम्म चोर पत्ता नलाग्नुले घटना निकै रहस्यमय भएको बताए । केही वर्ष अघि पुनर्वासकै एक सहकारीमा चोरी हुँदा निकै जालझेल पछि चोरीमा कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
सो घटनाको विषयमा ईलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीका प्रहरी नायब निरीक्षक गोपालबहादुर बोहराले शंकाको आधारमा पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिई उनीहरूको कल डिटेल्सका लागि पत्र पठाई अनुसन्धान गरिरहेको बताए । “निर्दोष नफसोस् भन्नाले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।” उनले भने “अबको केहि दिन भित्रै चोरीमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक गर्छौ ।”
सहकारीका अध्यक्ष पर्शुराम विश्वकर्माको सभाध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका नगरप्रमुख जिवनराज थापाको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । विशिस्ट अतिथिमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारीका सदस्य भरबहादुर बिष्ट रहेका थिए भने पुनर्वास नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष बिरबहादुर बोगटी रहेका थिए ।
सभाका प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख थापाले चोरीमा संलग्न दोषीलाई छिट्टै पत्ता लगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिने बताए ।
संस्थाका उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद अर्यालको स्वागत मन्तव्य सँगै शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका ब्यबस्थापक एककुमार श्रेष्ठले गरेका थिए ।
गत फागुन २६ गते राती पुनर्वासको पुरानो पुनर्वास सहकारी संस्था लिमिटेडमा अज्ञात समूहद्वारा रहस्यमय ढङ्गबाट चालीस हजार नगदसहित कागजातहरू र ल्यापट चोरी भएको थियो ।
चोरी भएपछि चोरी कस्ले ग¥यो भन्ने कुरा यति खेर निक्कै चर्चामा चुलिएको छ ।
पुनर्वास क्षेत्रमा चोरीका घट्नाहरु दिनप्रति दिन बृद्धी भएपछि स्थानीय बासिन्दा आतंकित बन्दै आएका छन् ।
बिगत केही महिनामा दर्जनौ साना तिना यस्ता घट्ना हुदै आएको र घटनाको बारेमा नागरिकलाई मुस्कान सहित सेवा दिने सुरक्षा निकाय नै मौन रहेको स्थानियको आरोप छ ।
पुनर्वास आस पासका क्षेत्रमा यस्ता चोरीका घटना बढ्दै गएपछि स्थानियबासी थप आतंकित हुनु परेको ओम टोल सुधार समितिका संयोजक नवराज लामिछानेले बताए ।
गत महिना पुनर्वास नगरपालिका–३, आई.बी.आर.डी. का ब्यापारी कृष्ण मगरको १५० सिसि को पल्सर मोटरसाइकल घरबाटै चोरी भएको थियो भने सोही ठाउँ बस्ने विशाल लामिछानेको २२० सिसि को पल्सर मोटरसाइकल चोरी भएको पीडितहरुले बताएका छन् । चोरीका विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा निबेदन दिएपनि हालसम्म चोर र मोटरसाइकल पत्ता लाग्न नसकेको पीडित कृष्ण मगरले दुखेसो पोखे ।
‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ लाई आत्मसात गर्ने नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म यी रहस्याहरुलाई उद्घाटन गर्न सकेका छैनन् । अपराध अनुसन्धानमा दक्ष कहलिएका नेपाल प्रहरीले यो घटनमा कहिले र कसरी सफलता हासिल गर्लान् त ? भन्ने सवाल यतिखेर निक्कै उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यस किसिमको घटनाले अहिले जनताको सेवा र सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरीको संगठनप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका भारतीय बजारहरुबाट हुने लाखौंको अबैध सामानहरुमा मिलोमतो भएको आरोप खेप्दै आएको पुनर्वास र बेलौरीका प्रहरीलाई यी चोरीका घटनाहरुले थप बदनाम बनाउँदै गएको छ ।